Shiinaha Lafaha Ash warshad iyo alaableyda | Gelken
Dambaska lafaha waa baraf cad ama budo ah oo la helay ka dib markii lafta lafta la tirtiray oo lagu qiyaaso 1300 The .Aaladaha ceyriinka ah ee aan dooranay si adag ayaa loo xushay waxaanan raacineynaa alaab tayo sare leh
Waxaa badanaa loo isticmaalaa soosaarida lafdhabarta heerka sare ee warshadaha dhoobada, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa muraayadaha opal, xasiliyaha midabka, wakiilka nadiifinta, sharaxaadaha sharoobada, iwm.
Fasalka Dambaska lafaha waa dhuxusha lafaha lagu farsameeyo illaa 120 mesh, oo loo adeegsado warshadaha dhoobada iyo demould-ka birta iyo nadiifinta bullaacadaha.
Dambaska lafaha waxaa laga helaa lafaha xayawaanka ka dib calcination heerkulka sare. Lafta ceyriinka waxaa lagu ridayaa haanta cadaadiska sare leh waxaana lagu darayaa qadar biyo ah oo kuhaboon. Lafta waxaa lagu uumiyaa 150 ℃ ilaa 2 saacadood, si lafta loogu jaro lafta lafta bilaa borotiin, kadibna la qalajiyo.
Xannibaadda lafta qalalan ee 'deprotein' waxaa lagu dhejiyaa foorno heerkul sare leh oo gaas dabiici ah shidaal ahaan waxaana lagu gubay heerkul sare oo ah 1250 ℃ 1 saac ama heerkul sare oo ah 1300 ℃ ilaa 45 daqiiqo Muddadan, 'N' waa la wada calcin karaa oo bakteeriyada oo dhan ayaa gabi ahaanba gubata.
Baloogyada lafaha gubay ee la gubay ayaa la jajabiyaa oo lagu baaraa qeexitaano kala duwan iyadoo la adeegsanayo shaashad birqaya, oo badanaa ay ku jiraan: 60-100 mesh, 0-3mm, 2-8mm, iwm.
Jir ahaan iyo Kiimiko Waxyaabaha Heerka Imtixaanka Natiijada tijaabada
5, Calcination loss (Miisaanka oo yaraada)
13. Muddo la hubo oo tayo leh: Saddex sano, Waa in lagu keydiyaa weellada xiran ee xaaladaha qalalan ee qabow ka fog waxyaabaha urta leh.
Hore: Buugga Xawaaraha Gaaban Jelly Glue
Xiga: Lafta xabagta xabagta